घरभित्रै ‘थुनिएर’ समाचार लेख्दाका सुख-दु:ख
घरभित्रै ‘थुनिएर’ समाचार लेख्दाका सुख-दु:ख रिपोर्टरको अनुभव
रेणु त्वानाबासु भक्त्तपुर - शनिबार, भदौ १३, २०७७
भदौ ३ गते साँझको समय थियो।
उपत्यकामा भदौ ४ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने घोषणा भइसकेको थियो। पुतलीसडकस्थित अफिसबाट घर फर्कने बेला सम्पादकज्यूले मलाई भन्नुभयाे, ‘भोलिदेखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ, त्यसकारण वर्क फ्रम होम अर्थात् घरमै बसेर काम गर्ने। तर वर्क फ्रम होम भनेर घरमा बस्नेमात्र होइन, काम पनि गर्ने।’
तर, मलाई यतिबेला कार्यालयमा गएर काम गर्न भन्दा घरमा बसेर काम गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ।
निषेधाज्ञाका कारण भक्तपुरदेखि काठमाडौं कार्यालयमा जान सम्भव भएन। किनकि मसँग आफ्नो सवारी साधन छैन। त्यसैले घरबाट समाचार लेखेर पठाउने भएँ।
पत्रकारिता पढ्ने बेलामा त घरमा बसेर समाचार तयार हुँदैन, फिल्डमा जानुपर्छ भनेर पढेको हो। अब पढेको बेला यस्तो भनेको छ भनेर लखरलखर बाहिर हिँड्नु नि भएन। बाहिर गएर पनि कुनै कार्यालय खुलेका हुँदैनन्।
त्यही भएर परिस्थितिअनुसार घरमै बसेर समाचार संकलन गर्न थालें। समाचार लेख्नका लागि विषयवस्तुअनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई मोबाइलमा फोन गर्छु। उठ्दैन। त्यसपछि फेरि प्रयास गर्छु, उठ्दैन। १-२ घण्टा पछि पुनः प्रयास गर्छु, बल्ल फोन उठ्छ अनि खुसी हुनुपर्छ।
मैले खोजेको व्यक्तिसँग समाचारका लागि केही कुरा गर्न मात्रै खोजेको के हुन्छु, उसले अहिले अलि व्यस्त छु पछि कुरा गर्छु है भनेर फोन राखिदिन्छ।
उता, समाचार पठाउने ढिलो भए सम्पादकको कल आइहाल्छ। घरमा बसेर केही गरेन कि के हो भन्ने लाग्दो हो ? बाहिर फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा नि गाह्रो अनुभव भयो मलाई त यतिबेला। भेट्न गएको भए कुरेर भए नि सूचना लिन मिल्थ्यो। अब फोनमा व्यस्त छु भनेपछि सकिहाल्यो।
अर्को समाचारलाई कल गर्छु। फोन त उठ्यो तर जुममा मिटिङ भइराखेको छ पछि कल गर्नु है भन्ने जवाफ आयो। मिटिङमा छु भनेपछि अरू केही भन्न पनि मिलेन। कस्तो समस्या।
समाचार तयार नभएपछि अफिसबाट सरहरूले घरमा बसेर केही नगरेको भन्ने सोच्नुहोला। सरले भन्नु नि भएको थियो, वर्क फ्रम होम भनेर घरमा बस्ने मात्र होइन, काम पनि गर्नुपर्छ।
भक्तपुरका सिडियोलाई दिनको ४-५ चोटि कल गरेकै हुन्छु। तर फोन उठ्दैन। उठे पनि समाचारका लागि कल गरेको भन्दा सबै हामीले बाहिर दिएकै छौं, यसबाहेक अरू केही नयाँ छैन भन्ने खालको जवाफ आउँछ। अरू केही बोल्न नपाउँदै फोन काटिन्छ।
के के योजना छ ? भनेर सोध्दा भएपछि थाहा हुन्छ भन्छन्। यस्तो खालको जवाफ पाइन्छ। हामीले सूचना नै राम्रोसँग पाइरहेका छैनौं। समाचार लेख्दा केही नबुझेर वा नयाँ सूचना संकलनका लागि फोन गर्दा व्यस्त छु, पछि कल गर्नुस्, आज त भ्याउँदिन भोलि कल गर्नुस है जस्ता बहाना देखाउँदै पन्छिनन्। भोलिपल्ट कल गर्यो उही जवाफ।
आजभोलि सबै कामहरू अनलाइनबाटै हुने भइरहेको छ। मैले अन्तर्वार्ताका लागि भक्तपुरको एसपीसँग कुरा गरें। उहाँले कल त उठाउनुभयो। तर जवाफमा म बिहान १० देखि ५ बजेसम्म अनलाइन ट्रेनिङ क्लास हुन्छ, त्यसैले नभ्याउने भयो भनी जवाफ दिनुभयो। सबैजना अनलाइनमा नै व्यस्त हुने भएपछि पत्रकारले सूचना कोसँग लिने त ?
समाचार संकलनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोन गर्दा फोन उठ्दैन। बल्ल बल्ल उठे पनि अहिले बिजी छु, पछि गर्नुहोला। यस्तो खालको उत्तर आउने गर्दछ।
निषेधाज्ञा लागू भएपछि आजभोलि जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूले फोन उठाइरहेका छैनन्। कि सूचना संकलन गर्नका लागि सम्पादकले नै फोन गर्नुपर्ने हो कि? सम्पादक वा अरु कुनै चिनेको व्यक्ति नभए सूचना नदिने नियम छ कि? सबैजना व्यस्त छन् आ–आफ्नो ठाउँमा।
पत्रकारले चाहिँ काम नपाएर फोन गरेका त होइनन् होला? टाइमपास गर्नका लागि कल गरेका पक्कै होइनन्? पत्रकारहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेर समाजमा सही सूचना प्रवाह गर्न नै खटेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल, वेबसाइट र जुम भएपछि अहिले पत्रकार नै नचाहेको हो त हाम्रो समाजलाई?
कुनै कार्यालयले उनीहरूको वेबसाइटमा सूचना राखेपछि सबै जनताले पाउने हुन् त? आजभोलि सबै सरकारी र गैरसरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट भएपछि कुनै सूचनाको लिनलाई फोन गर्दा वेबसाइटमा छ, हेर्नु न सबै छ त्यहीं। यस्तो खालको जवाफ पाइन्छ। के यो ठिक हो? त्यसो भए वेबसाइटमा हेरेर तपाईहरूलाई सोध्दै नसोधी समाचार लेख्दा हुन्छ? मेरो प्रश्न छ।
लकडाउन भएपछि धेरै अफिस वर्क फ्रम होमको अवस्थामा छन्। तर पत्रकारहरू भने फिल्डमा नै गएर समाचार संकलन गरिरहेका छन्। तर अहिले निषेधाज्ञा जारी भएपछि कति पत्रकारहरू पनि घरमै बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पत्रकारलाई पनि घरमै बसेर समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यता छ। अब बाहिर गएर पनि के गर्ने बाहिर कोही हुँदैनन्।
सबै अफिस बन्द छन्। समाचार संकलन गर्ने सबै काम फोन गरेर नै लिनुपर्ने अवस्था आएको छ, जुन मेरो लागि अझ बढी सकस बनिरहेको छ।